トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Musiyano basa mutemo nokuda nzvimbo nepachinko yaiitirwa (Station Agents & Suburban zvitoro)
chitoro Chero, ndinofunga kuti ndiyo kuita bhizimisi siyana namano kubudikidza nzvimbo ezvinhu. Nepachinko hapana kunze, tine matanho akasiyana-siyana uye siyana, bhizimisi uye kuita kwavo chitoro mufananidzo nokuda nzvimbo ezvinhu. Somuenzaniso, pamberi chechitima zvitoro uye Suburban muzvitoro, musiyano ihuru zvinhu. Ngativerengei enzanisa musiyano munguva mutengi nechigadziko uye yepamusoro oparesheni.
■ nepachinko parlors kuti aite basa iri nguva mapazi
Station pamberi ravarwi nepachinko yokumusoro iri mutengi nechigadziko uye nenhamba kumhanya, vagadzirira zvitoro zvakawanda Downtown chime motokari. Nokuti pedo pachiteshi chezvitima, uye vabati Madzimai epamusha hofisi uye vakwegura uye nzira kubasa kubva majaya nemhandara, tinotarisira mutengi mujinga zvakasiyana siyana vemazera. Zvikurukuru, maitiro ichi zvakawanda zvinozivikanwa pamusoro mevhiki. Over manheru kubva mangwanani, zviri nani, yakadai epamba uye vakwegura vazhinji vachava kunyanya bhendi mukadzi kazhinji nguva.
Asi pamberi ravarwi yepamusoro yokuvhiyiwa vakadaro kubva pano. Kubva manheru kubva shure zviri nani, iyo yave kuuya kuchitoro kubva
mangwanani, munzira kutsiviwa, nguva ino salaried vashandi pashure basa uchatanga kutsanangura vakawanda oparesheni. Maererano nguva ino, chii turnover zvikuru mutengi chawo ndiko, 'That chinonyanya nyaya pamberi chechitima chitoro.
chitoro apo pane riini matambudziko mashandiro pamusoro pechirevo, nekuti pane vatengi kudzokera inobviswa kunyange simba chawo, achava somumwe zvisarudzo uyewo nekuti chinangwa ikoko.
Nokutsamwa yemapurisa pamberi makwikwi, muchitoro haagoni kukwezva vatengi panguva 7 pm kana 8 pm musi mevhiki 6 o'clock, ine kurarama zvava zvinonetsa.
(※ Nenzira, kana muchitoro ane kuchinja bhora kunze Chii pamwe ROM Yara Horukon, pfungwa iri kuti kunonga kure nguva ino mapazi.) _ x000D_
Zvisinei, nokuti salaried vashandi yezororo iri zororo, nokushanda nhamba yepamusoro uye manheru kubva masikati, vachava akasiyana zvachose kuyerera uye mevhiki. Mukuwedzera, nokuti makwikwi chitoro kazhinji, kunyange rekukwazisa bhora kubva mamwe muzvitoro, kuvhiyiwa kuchaita kuti akachinja chaizvo.
■ Suburban nepachinko yokumusoro mutengi nechigadziko uye nhamba Panguva mapazi
pamusoro watinya kushanda, uye uti ndezvipi famba Suburban chitoro, usatarisira kukura mutengi napamaruva pamusoro Station chitoro. Achitaura vanoitisana, uye baba venyu munharaunda Madzimai epamusha uye zororo, zera riri kusimudzira, tinoona yakawanda pakuonekwa munhu, zvakadai 60s kubva 40s.
vakokwa zivo pamwero achiri pasi, zviri zvizhinji, panewo zvakawanda kuitika kuti chinhu inotapira patafura simba nechigadziko uye chipikiri kuchinja.
chero haisi nevakawanda resitorendi kuti zvakakwana kuzodana guhwa iri Ruwa nepachinko yaiitirwa, uyo kupaka ari akashanyira nemotokari kana mudhudhudhu kana zvakadaro, pane, Hazvirevi kudaro zvakawanda, saka kunyange vaya vari kuchitoro kubva mangwanani maawa kwete kuti vazhinji ndiko Nezvagara Zviripo.
vakawanda, nekuti kana uchigara kwaunogara anouya kuchitoro, achimhanya ari kutanga elongation pa 12 o'clock vasati uye pashure masikati, nhamba kugadzirwa achava mazhinji zvitoro kumativi 3:00 pm kubva 1 pm. Uye, chitoro Suburban iwe hapana musiyano pakati yepamusoro kushanda pazuva rokutanga revhiki. Kunyange kana pane imwe kukwikwidza chitoro, nekuti hazvina kuti pedyo, zviri nyore kuisa wakaiswa vatengi.
ndiko kushandisa tsime Kurwisa Pachishandiswa izvi zvinhu ???
1. Also chomurume nguva mapazi
dura nzvimbo yepamusoro, nokuti nguva nenguva iyo oparesheni chinoshanda zvakasiyana, ipapo sezvo imwe nzira ndechokuti kunonga kubvisa Hottest nguva zuva. Somunhu nepachinko yokumusoro, Chokwadi, nokuti munhu akapa bhora kubva zvizhinji kana paine mukuru Utilisation zvazvingava hauna kuti kufarirwa kuchitoro, hazvina aiming ikoko.
2. Panguva nguva nenguva iyo nguva yakakodzera
vatengi vatengi kushandisa kuchinjana vanowanzotevedzera inotapira patafura simba pechingoro uye chipikiri chinowanzoitika kutora. Izvi imhaka yokuti, somuenzaniso, munyaya epamba, uye hazvizovipozve nyaya sei achifa chakasimba, saka havafaniri vachigadzira kudya, ndine yakawanda vanhu kuti aizovatsigira nyongoroka. Pachipuro kuti anotambira mari iri nzira Ichatakura chikuva yakadaro Panewo. _x00 0D_
3. By tsvakurudzo zivo pamwero
mutengi nehwaro vatengi, Ndokusaka kunzwisiswa kuti ufanane vateereri avo. Level panewo Zvinogoneka kuti chinhu zvinonaka nechigadziko yakaderera vanhu kakawanda tenga. Chokwadi, chokwadi chokuti vanhu vane yakakwirira azvipire haasi kunyange munhu mumwe, asi kuti kungangova kuva ndechokuti chitoro pacharo asina kunaka, Sajikagen kumativi acho ari chete kuenda rodzai ruzivo muhondo musingazopandukiri.